" ပန်းမဉ္ဖူ " ယွန်းယွန်းဟာ ကဗျာကိုသွန်းတဲ့ 
" စင်ဒရဲလား " ' က ' ကြိုး ' က ' ကွက်များနဲ့ 
အာရုံဦးသူရဲကောင်းကို ဗျက်စောင်းတစ်လက်နဲ့ ကြိုဆိုတယ် . . . . .
အက္ခရာတွေ အစီအရီ ဖြန့် ကျဲထားတယ်
ရှေးဟောင်းရင်ဘတ်ရဲ့" လှို့ ဝှက်ကျောက်စာ " ဟာ
အက်ကြောင်းရာကြောင့် တန်ဖိုးအားဖြင့်လျော့မသွားဘူး . . . . .
တစ်ခြမ်းပဲ့ ဝတ်မှုန်လေး လွင့်မျောမသွားဖို့ 
စကြာဝဋ္ဌာ ရဲ့အမြင့်ဆုံးလမ်းကိုဖောက်
ပထမတန်းစား အချစ်သူရဲကောင်းတံဆိပ်တွေ အခါခါရခဲ့ တယ် . . . . .
' ရေ ' ' မြေ ' ' နေ ' ' လ ' တွေကွယ်ပျောက်နေပေမဲ့ 
" ကြယ် "တစ်လုံးရဲ့အ" ဖြူ " ရောင်သစ္စာမှာတော့ " စင် " ကြယ်တဲ့ 
သမုဒ္ဒရ ၀ိရောဓိလေးများဟာ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လင်းလက်လျက် . . . . .
သိုးဆောင်းတစ်လက်ရဲ့" ဧ က ရီ စာ " လွမ်းချင်းမှာ
ကြည်နူးဖူးတဲ့လမ်းအိုဟောင်းလေးပါခဲ့ ဖူးတယ်
မဟူရာညမှာ မှည့်တဲ့အလင်းနှစ်သန်းပေါင်းများစွာဟာ
မိုးသောက် သောင်ပြင်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်းတစ်ပုဒ် သီကြူးနေတယ် . . . . .
ဂီတာ တစ်လက် ကြိုးပြတ်သွားသလို
အမြဲစိမ်းဂီတ ရဲ့ကာရန်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ
မြို့ ဟောင်းတစ်လက် ပုံမပျက်ရှိခဲ့ တယ်
" လေရူးသုန်သုန် " မှာ" ဗီးနပ်(စ်) " ပေးတဲ့အဖြူရောင်တောင်ပံတစ်စုံဟာ
" ဂျူးလိယက် " အတွက် စွယ်တော်ပင်ရိပ်အိုက " လ၀န်းပျို " ဖြစ်ပါစေ . . . . .
ဘလော့လောကမှ အနားယူသွားသော အမကြယ်ဖြူစင် က မွေးနေ့ လက်ဆောင်ကဗျာပေးပါရန်တောင်း
ဆို လာသဖြင့်အတတ်နိုင်ဆုံးရေးဖွဲ့ ပေးလိုက်ပါတယ် . . . . . ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ
မောင်လေးမိုးစက်အိမ်ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကဗျာလေးကို အရမ်းကြိုက်လို့ ဘလော့မှာတင်လိုက်တာပါ..
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 15:13 15 comments
တကယ်ဆိုရင် အချစ်ဆိုတာ သေချာတာတော့ဘဝနဲ့ တခြားဆီဘဲ အရာရာရင်ဆိုင်သွားချင်လည်း စိတ်ကူးထဲကလောက်မလွယ်ဘူး..ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းတွေလည်း
ဒီကဗျာလေးက နောက်ဆုံးကဗျာလေးဖြစ်မှာပါ...နောက်ဆိုရင် ချစ်သူသို့ဆိုပြီးကဗျာလေးတွေ
ရေးဖြစ် တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး..ဘလော့လေးကိုတော့ အမှတ်တရအဖြစ်ရှိနေဦးမှာပါ..
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 08:55 26 comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 22:107comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 02:00 11 comments
ချစ်သူတားမြစ်ထားတဲ့ ကော်ဖီခွက်လေးရယ်၊ ...
ကျွန်မအတွက် အိပ်ပျက်ညတွေရယ် ...
လွမ်းတိုင်းရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာအပိုင်းအစတွေရယ် ပဲ ရှိတော့တယ် ချစ်သူ...။
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 21:48 15 comments
ဘေးနားကမခွဲ တွဲကူမယ့်သူပါ ..ကို။
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 17:57 10 comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 00:01 13 comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 08:434comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 22:119comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 22:002comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 11:11 8 comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 06:459comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 07:077comments
ဒီနေ့ဟာ (၁၅) လပြည့်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ပါ..
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 08:37 14 comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 08:27 18 comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 08:42 18 comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 19:40 18 comments
မင်းနမ်းတက်ရင် တသက်စာ ထာဝရ
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 09:39 17 comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 09:50 15 comments
ငါလဲ ငါ့ဘ၀ကို ငါလှော်လို့
လွတ်လပ်စွာရှင်သန်ခွင့် မရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့..... ။
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 01:04 17 comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 08:56 12 comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 10:52 11 comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 07:38 23 comments
တစ်ဘ၀စာ မင်းကိုငါ.. ချစ်ခဲ့တယ်။
အားလုံးကို အဟုတ်ထင်ပြီး ငါ... ယုံခဲ့တယ်။
အမှန်တွေမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ ငါ.. သံသယ၀င်ခဲ့တယ်။
ဒဏ်ဖြစ်လဲ ငါ.... ကျေနပ်တယ်။
ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာနဲ့ကွက်တိဖြစ်တဲ့ကဗျာလေးကိုပေးတဲ့ blog အကို ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်...
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 18:127comments
နင်လည်း .. နာ ၊ ငါလည်း ..နာ
နင်လည်းလွမ်း ... ငါလည်း လွမ်း
နင်လည်း ...ငို၊ ငါလည်း...ငို
မုန်းမေ့လို့ မရကြမယ့် အတူတူ
( စစ်မဖြစ်ကြေး )
( ငြိမ်းချမ်းရေး သ၀ဏ်လွှာလေး)
နေ့လည်း... လွမ်း ၊ ညလည်း ...လွမ်း
မျက်ရည်တစမ်းစမ်း နဲ့
ရန်ဖြစ်ပြီးမှ၊ ပြန်နမ်းမိတဲ့ ...အနမ်း
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 07:016comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 19:486comments
သူကလည်းအမှန် ကိုယ်ကလည်း အမှန်
အမှန် ၂ ခုထိပ်တိုက်တွေ့လို့
မနေနိုင်တော့လို့ ပေါက်ကွဲမိတဲ့ အတိုင်းအတာက
ခံရမှာတော့ တစ်ဘ၀စာလောက်ရှိပါရဲ့..... .
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 07:585comments
မှန်နေတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခု မဟုတ်လား.. ..
ချစ်သူ.. ကို ပြောပြမယ်နော်...
တနေ့ တနေ့ ..
မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ရှင်သန်နေတာ သစ္စာတစ်ပုဒ်ပါ….။
မျှော်လင့်ချက်တွေ သိပ်မရှင်သန်စေဖို့ 
ဆုတောင်းစောင့်စားနေတာလည်း သစ္စာတစ်ပုဒ်ပါ ချစ်သူရယ်..။
မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေပေမယ့် လေးနက်တဲ့ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ သစ္စာက
ထာဝရ.. ခိုင်မြဲမယ့်အချစ်တွေနဲ့ 
နားလည်မှုကိုယ်စီနဲ့ကြင်ကြင်နာနာ
မင်းအနားမှာနေခွင့်ရှိချင် တယ်.. ချစ်သူရယ်…
တနေ့ နေ့နွေးထွေးငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဒီအိမ်ကလေးကိုတော့..
အလိုက်တသိနဲ့ပြန်လာပေးပါ.. ချစ်သူရယ် ...
မုန်းလို့ ဝေးကွာသွားတာမဟုတ်ပါဘူး.. .
ကံကြမ္မာက တို့ နှစ်ယောက်ကို
ရက်စက်တဲ့ ကံကြမ္မာကြောင့် မင်းနဲ့ တို့ 
နေရာလေးတစ်ခုကိုတော့ မင်းကစိုးမိုးဆဲပါချစ်သူ.. .။
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 06:515comments
အချစ်စစ်ဆိုတာ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မလိုဘူးတဲ့
ငယ်တုန်းအချိန်က မဖြစ်နိုင်တာတွေလို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့်
လက်တွေ့ဆိုတဲ့ ဆရာက သင်ခဲ့ပြီလေ..
အခုတော့လဲ ဘယ်လိုမှ ဆုံဆည်းနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပေမယ့်
နောက်ထပ် ဘာမှလဲ မလိုပါဘူး.. တောင်းဆိုဖို့လဲ စိတ်မကူးမိပါဘူး..
ကိုယ့်ကိစ္စရှိလာရင်လဲ အရင်ကလို ပြောပြချင်ပေမယ့် ပြောမထွက်တော့ဘူး
'သူငယ်ချင်း'ဆိုတာ 'ချစ်သ'ူမှ မဟုတ်ပဲနော်
အားကုန်ခန်းပြီး စိတ်တွေ သိပ်ပင်ပန်းတဲ့အခါ....
လူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေကို ဒေါသထွက်မိတဲ့အခါ....
မျိုသိပ်ထားရတဲ့ ဝေဒနာတွေ ထွက်ပေါက်လိုတဲ့အခါ....
ရင်ထဲက အဖြစ်တွေကို လူတစ်ယောက်မှ ထုတ်မပြောချင်တဲ့အခါ....
လက်ပိုက်ကြည့်နေရတဲ့ အခြေအနေတို့ကို အားမရတဲ့အခါ....
မကြားချင်တဲ့ သတင်းဆိုးတွေ ရောက်လာတဲ့အခါ....
နံရံလေးဘက်ထဲမှာ ချောင်ပိတ်မိပြီး ပြေးပေါက်ရှာမတွေ့တဲ့အခါ....
ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေကို ငြီးငွေ့လို့ ဘယ်သူနဲ့မှ ရင်မဆိုင်ချင်တော့တဲ့အခါ....
အဲ့ဒီ အချိ်န်အခါမျိုးတွေမှာ ....
ချစ်သူ့ ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်ရင်း အားရပါးရ ရှိုက်ငိုချင်မိတယ်...
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 18:316comments
ကြယ်လေးရဲ့ blog အကို ကိုကိုမောင် က အလိုချင်ဆုံးအရာဟာနှစ်သက်စွာ အိပ်စက်ခြင်းပါဘဲဆို လို့
လူတော်တော်များများဟာ ညဘက်အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါခံစားရတတ်ပါတယ် အဲဒီလိုအိပ်မပျော်တဲ့သူတွေအ
တွက် ဒီအကြံပြုချက်လေးတွေက အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
(၁)အိပ်ချိန်တွေကို အကြွေးမထားပါနဲ့။အိပ်ရေး ပျက်ခြင်းဟာ ဘီယာ အလွန်အကျွံသောက် သူတွေ လိုပဲသင့်
(၅)ရေနွေးပူချိုးခြင်း၊aromatherapy၊တရားထိုင်ခြင်း၊ယောဂကျင်စဉ် ကျင့်ခြင်းစတာတွေ ကနှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်
(၆)အိပ်ခန်းဟာ အပူချိန်မျှတပြီး အလင်းရောင်တွေမ၀င်နိုင်အောင် ကာကွယ်ထားရပါမယ်။တီဗွီနဲ့ကွန်ပြူတာ
ဒီလိုပါပဲ။တစ်နေ့ (၇)နာရီအိပ်သူ ဟာ(၈)နာရီအိပ်သူထက် ကယ်လိုရီ ၆%လောက်နေ့စဉ်ပိုစားတတ်ကြ
(၈)မအိပ်ခင်မှာဆေး လိပ်မသောက် သင့်ပါဘူး။ဆေးလိပ်ဟာ ကဖင်းဓါတ်လိုပဲအိပ်ချင်စိတ် ကိုပျောက်ေ စ ပါ
(၉)သင်လဲလျောင်းတွှဲအခါအစာအိမ်က အက်ဆစ်ေ တွကြောင့် Heart Burn ရတတ်ပါတယ်။ေ ခါင်း အုံးမြင်
(၁၁)အရက်သောက်ရင်တော့မှောက်သွားမှာသေချာပါတယ်။ဒါပေမယ့် အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ပျော်တာ မျိုးမဟုတ်
ပါဘူး။ဒါကြောင့်အိပ်ေ ပျာ်အောင် အရက်ေ သာက်တာမျိုးရှောင်သင့်ပါတယ် မအိပ်ခင်(၃)နာရီအတွင်းမ
(၁၂)(၈)နာရီပြည့်အော င် အိပ်ပါ။(၆)နာရီပဲအိပ်လျှင်တော့ သွေးတိုးရောဂါခံစား ရဖို့အခွင်အလမ်း ၇၀% ပို
(၁၃)နောက်တစ်နေ့အတွက် အလုပ် အစီ အစဉ်ေ တွကို နေ့လည် ကတည်း ကလုပ်ထားပါ။အိပ် ယာထဲ
(၁၇)ထောပတ်သီးမှာပါတဲ့ Tryptophan ဆိုတဲ့ဓါတ်ပစ္စည်းက အိပ်ပျော်အောင်ကူညီပေးပါသတဲ့။ထောပတ်
(၁၉)ကိုယ်ဝန်ဆောင်ေ တွမှာတော့ ကာဗိုလ်ဟိုက်ဒြိတ်များ တဲ့ အစားအစာတွေကအိပ်ေ ပျာ်အောင် ကူညီ
(၂၁)အိပ်ဆေးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တောင် (၅-၁၀) ရက်ထက်ပိုမသုံး သင့်ပါဘူးသ ဘာဝအတိုင်း အိပ်ပျော်
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 07:286comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 06:103comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 00:277comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 09:103comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 07:412comments
ထင်ခဲ့တယ်…စိတ်ကူးလေးတွေယဉ်ခဲ့ကြတယ်…မျှော်လင့်ချက်တိုင်းမှာအနာဂတ်ဟာတောက်ပလို့ပေါ့  အဲ့ဒါတွေကအိပ်မက်တွေဆိုရင်ငါမနိုးထပါရစေနဲ့ချစ်သူ…အိမ်မက်ထဲမှာရှင်သန်ခွင့် ပေးပါ…
အရမ်းကြိုက်လို့ကူးထားမိတဲ့ကဗျာလေးပါ...ဘယ်blog ကမှန်းမမှတ်မိတော့လို့..link မပေးလိုက်ရပါဘူး...ခံစားချက်ခြင်းတစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 07:282comments
ငါ မိုးမသောက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အထီးကျန်မှု့နဲ့မှောင်တဲ့
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 07:575comments
ဒီအစီအစဉ်လေးကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကမျှဝေလို့ရခဲ့တာပါ..အဲ့ဒါနဲ့blog ကသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း
2009 ခုနှစ်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်သစ် တစ်ရပ်ကို စတင် မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပကို ရောက်ရှိနေကြတဲ့ ရွှေမြန်မာတွေကတော့ ဒီအစီစဉ်ကို အထူးနှစ်သက်ကြမယ်ဆိုတာ ပြောစရာကို မလိုပါဘူး။ ဒီလောက်တောင် ညွှန်းနေမှတော့ ဘာအစီအစဉ်လေးလဲ ဆိုတာ သိချင်နေကြမှာပေါ့နော်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေအတွက် ပြည်တွင်းမှာ ရှိကြတဲ့ မိသားစု၊ ချစ်သူ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်နိုင်မယ့် ၀န်ဆောင်မှုကို all-chanel.com က စတင် ပေးဆောင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ နှစ်သစ်ကူးကို ကူးပြောင်းမယ့် ဧပရယ်လ (၁) ရက်နေ့ ကစပြီး www.all-channel.com ရဲ့ အသင်းဝင်တွေကို ဒီဝန်ဆောင်မှုကို စတင်ပေး ဆောင်တော့မှာ ဖြစ်လို့ ဒီလိုထူးခြားတဲ့ အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်လို့ မဖြစ်ဘူးနော်။
အထူးစပါယ်ရှယ် Free Call စတင်စမ်းသပ်ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီ.
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 19:202comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 09:472comments
တက်သစ်စ လူငယ်ပန်းချီဆရာလေးတစ်ယောက် သူအစွမ်းကုန် ကြိုးစားရေးဆွဲထားတဲ့
ပန်းချီကားလေးကို နံရံတစ်ခုပေါ်မှာ ချိတ်လိုက်တယ်.
“လူကြီးမင်းများခင်ဗျာ. ကျွန်တော့်လက်ရာ ပန်းချီကားလေးကို
အားပေးချီးမြှောက်တဲ့အတွက် အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်.
လိုအပ်နေတဲ့အရာလေးတွေ၊ အမှားလေးတွေကို ထောက်ပြပြောဆိုပေးခဲ့ပါ
အဲလိုလေးလည်း ရေးထားတယ်. ပြီးတော့ ပန်းချီကားလေးရဲ့ ဘေးနားမှာလည်း
ညနေစောင်းတော့ ပန်းချီပြခန်းလည်း ပိတ်ရော ပန်းချီဆရာလေးလည်း
သူ့ပန်းချီကားလေးကို ပြခန်းလာကြည့်သွားသူတွေ ဘယ်လိုမှတ်ချက်လေးတွေများ
ပေးသွားမလဲလို့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ သွားကြည့်တော့တာပေါ့.
သူ့အသည်းနှလုံးနဲ့ ရေးဆွဲသီမှုန်းထားတဲ့ ပန်းချီကားလေး တစ်ချပ်လုံး ရစရာ
မရှိအောင် အစက်တွေ၊ အပြောက်တွေ၊ အ၀န်းတွေ၊ အ၀ိုင်းတွေ ပြည့်နှက်နေခဲ့တယ်…
အခန်းထောင့်တစ်နေရာကိုသွားပြီး ပန်းချီဆရာလေးလည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်
ဘယ်လောက်ကြာအောင် သူငိုနေခဲ့တယ်မသိ. သူ့ပုခုံးကို လူတစ်ယောက်
လာကိုင်တော့မှပဲ သူလည်း ဖျတ်ခနဲ တုန်လှုပ်ပြီး သတိပြန်ဝင်သွားခဲ့တယ်..
“ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ. ဒီပန်းချီကားလေးကို ကျွန်တော့်ရဲ့
အကောင်းဆုံး စုတ်ချက်တွေနဲ့ ခြယ်မှုန်းထားခဲ့တာဗျ. ခုတော့ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့
စုတ်ချက်မှားတွေကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာတစ်ခု
“ဟင်. ခုလိုဖြစ်သွားတာ ကျွန်တော်မှားသွားတာ မဟုတ်ဘူးလား. တကယ်ဆို
ကျွန်တော် သူတို့ကို ပြင်ဆင်ခွင့်မပေးခဲ့သင့်ဘူး. ကျွန်တော့်ပန်းချီကားဟာ
ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ရာသီးသန့်ပဲ ဖြစ်နေစေရမှာ”
“မင်းမမှားပါဘူး ချာတိတ်. မင်းရဲ့ အတွေးအခေါ်မမှားပါဘူး.
“အိုကေ. ဒီပန်းချီကားနဲ့ တစ်ထပ်တည်း တူညီတဲ့ ပန်းချီကားနောက်တစ်ချပ်
မင်းဆွဲပါ. ဒီအတိုင်းပဲ စုတ်တံတစ်ချောင်းနဲ့ ဆေးခွက်ကို
ပန်းချီဆရာလေးက သူ့ကို ဆရာကြီးလို့ခေါ်လိုက်တော့ သူလည်း နှစ်ခြိုက်စွာ
“ထူးခြားတယ် ချာတိတ်. ပန်းချီကားဘေးနားမှာ ချိတ်ထားတဲ့ မင်းရဲ့ စာသားကို
လိုအပ်နေတဲ့အရာလေးတွေ၊ အမှားလေးတွေကို ထောက်ပြပြောဆိုပေးခဲ့ပါ.
ဘာကြောင့်မှားတယ် မှန်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ယထာဘူတ ကျကျ ဆွေးနွေးတင်ပြပေးပါ.
ပြီးတော့ ဒီပန်းချီကားလေးဘေးနားမှာ ရှိတဲ့ကင်းဗတ်စလေးပေါ်မှာ
လူကြီးမင်းရဲ့ လက်ရာလေးကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပေးပါ.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.”
နောက်တစ်နေ့ ပြခန်းပိတ်ချိန်ရောက်တော့ သူ့ပန်းချီကားလေးဟာ
မီးရောင်အောက်မှာ ခန့်ညားထယ်ဝါစွာနဲ့ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ
၀င့်ဝင့်ကြွားကြွား တည်ရှိနေခဲ့တာကို တွေ့လိုက်ရတယ်.
ထူးခြားတာကတော့ ဘယ်လိုဆေးစက်အရာမှ သူ့ပန်းချီကားလေးပေါ်မှာ ရှိမနေခဲ့သလို
ဘေးနားမှာ ထားပေးထားတဲ့ ကင်းဗတ်စလေးနဲ့ စုတ်တံဟာလည်း အရာမယွင်းဘဲ
ပန်းချီဆရာလေးလည်း သိပ်ကို အံ့ဩသွားခဲ့တော့တာပေါ့…. ဘာလို့လည်းဆိုတော့
သူ့ပန်းချီကားလေးရှေ့မှာ လူတွေ စုပြုံပြီး တိုးဝှေ့ကြည့်ရှု ဝေဖန်နေတာကို
သူ နေ့ခင်းကတည်းက တွေ့နေခဲ့တာကိုး…
မနေ့ကလိုပဲ သူ့ပန်းချီကားလေးပေါ်မှာ ပြင်ဆင်ချက်တွေ၊ ဝေဖန်ချက်တွေ
ခုတော့ သူထင်သလို တစ်ခုမှမဟုတ်ဘဲ သူ့ပန်းချီကားလေးဟာ သိပ်ကို
အပြစ်ကင်းစင်စွာနဲ့ ပြခန်းနံရံပေါ်မှာ ခေါင်းမော့နေခဲ့တယ်.
“အဲဒါပဲ ချာတိတ်…. လူတွေဟာ သူများတွေရဲ့ အမှားတွေ၊ ဟာကွက်တွေကိုပဲ
ဆရာကြီးဟာ ပန်းချီဆရာလေးရဲ့ မျက်ခုံးထူထူအောက်က စူးရှထက်မြက်ဟန်ရှိတဲ့
မျက်ဝန်းအစုံကို စေ့စေ့စိုက်ကြည့်ရင်းက သူ့ရဲ့ ဆုံးမစကားကို တစ်လုံးချင်း
“မင်းလုပ်စရာရှိတာကိုသာ မင်းလုပ်ပါ. မင်းကိုယ်မင်းယုံကြည်စွာလုပ်ပါ.
မင်းမှန်တယ်ထင်တာကို မင်းစွဲကိုင်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်စေဘဲ
မင်းရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ. မျက်စိဟာ မြင်ဖို့ဖြစ်ပေမယ့်
မမြင်သင့်တာတွေအတွက် တစ်ခါတစ်ရံ ကန်းပေးရမယ်. နားဟာ ကြားဖို့ဖြစ်ပေမယ့်
မကြားသင့်တာတွေအတွက် တစ်ခါတစ်ရံ နားလေးပေးရမယ်.
ထိုညက ကြယ်တွေစုံနေသော ကောင်းကင်ပြာကြီးကို လူငယ်လေးတစ်ယောက်
မျက်ရည်များကြားမှ ပြုံးလျက် ခေါင်းမော့ကြည့်နေခဲ့လေသည်…..
forward mail လေးကနေရလို့တင်လိုက်တာပါ..ကျန်မလည်းပန်းချီဆရာလေးလို
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 23:545comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 07:312comments
ခဏတာပေမယ့် ကျန်ရစ်ခဲ့သူ အတွက်
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 06:32 1 comments
ဖတ်မိတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ခံစားရသလို ရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 08:223comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 08:13 1 comments
အချစ်ရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေ ကြားထဲမှာ
ငါကရော ဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့ ချစ်နေတာလဲ...
ချစ်သူကို အချစ်ကြောင့် စွန့်လွှတ်ဖို့လား---
အချစ်နဲ့ စစ်မှာ မတရားတာမရှိဘူးဆို...
Greengirl ရဲ့ကဗျာလေးကိုဖတ်မိပြီး ခံစားရသလို ပြန်လည်ရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 00:055comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 23:582comments
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မည်ဆိုပါက တောင်းဆုတစ်ခုတော့ပြုချင်ပါတယ်......နိဗ္ဗန်မရောက်မီ ဖြစ်လေရာ လူ့ဘ၀ဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းချစ်ရသောသူ၏ သံသယ နှင့်စွပ်စွဲချက်များမှကင်းလွတ်ရပါလို၏။
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 23:16 1 comments
ဝဋ် ဆိုလျှင်လည်း ကျေချင်ပါသည်
“မခွဲဘူးလို့” ဘုရားစူး ကို ကျိမ်အုံးမယ်.
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 20:303comments
အထီးကျန်ခြင်းကို အပြင်းအထန်ခံစားရသောအချိန်များသည် သူမတစ်ယောက်ထဲ တိတ်ဆိတ်စွာတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလွမ်းနေရသည့် အချိန်များပဲဖြစ်သည်....ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်
ကြည်နူးခြင်းများကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသောနေ့စွဲ များတွင်သူမ၏ အချိန်များ၌ တစ်စုံတစ်ယောက်
အမြဲရှိနေခဲ့ပါသည်….ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ အသံထွက်တို့ ခေတ္တဆွံအနေခဲ့သော အချိန်များတွင်
သူ၏ ဂရုစိုက်တတ်မှုများကြားတွင် သူမ၏ဘဝသည် ချစ်ခြင်းတို့နှင့် လင်းလက်လှပဖူးခဲ့ပါသည်
…သူရှေ့တွင် သူမက ကလေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ပြန်ဖြစ်သွားသည်…သူမ၏ဆံစများကို
သူကအသာအယာပွတ်သပ်ပေးတိုင်း ..သူမ၏နဖူးပေါ် နူးညံ့သောသူ့လက်ချောင်းများ၏
မနက်တိုင်းချစ်သူအားဖုန်းဆက်ပြီး အိပ်ရာမှနှိုးခြင်း ဖြစ်သည်….အခုအချိန်တွင်တော့
တယ်လီဖုန်းလေးကလည်း တိတ်ဆိတ်ဆွံအစွာ ငြိမ်သက်နေပါလိမ့်မည်….
ချစ်သူနဲ့အတူတူ စကားပြောရင်းသောက်ရသော ကော်ဖီတစ်ခွက် ၏အရသာသည်ဘာနှင့်မျှမတူအောင်သူမအတွက်ထူးခြားကောင်းမွန်နေခဲ့သည်….
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 18:032comments
ငါက ပျော်ရွင်မှုကင်းမဲ့တဲ့ အရိုင်းတစ်ယောက်ပါ….
မင်းကို မျှဝေခံစားဖို့ မဖိတ်ခေါ်လိုပါဘူး
တဆစ်ဆစ်နဲ့ ကိုက်ခဲတဲ့ အလွမ်းဝေဒနာ
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 17:592comments
မင်းကိုချစ်မိတဲ့ ငါရင်ထဲက အလွမ်းတွေပါ
သိပ်ချစ်လွန်းလို့ မပြောရက်ဘူး သိလား
အရာရာပြီးဆုံးသွားပီဆိုပေမယ့် ငါ့ရင်ထဲက မင်းအတွက်
စိုက်ခဲ့တဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်က ငါ့သမိုင်းမှာ
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 01:530comments
မင်းလေးရဲ့ရှေ့ ခြေရင်းလေးမှာ ဖြန့်ချ…….
ရင်ကွဲမတတ် ချစ်ရပါတယ် ဆိုတဲ့
ငါ့အချစ်… အချစ်မရှိရင် ငါရှင်သန်ခြင်းတွေ
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 01:510comments
ငါဘယ်လောက် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကို မင်းမရိပ်မိခဲ့ဘူးပေါ့..အရာရာအားလုံးက
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 01:480comments
ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 01:420comments